Ndị a bụ nsogbu bụ isi nke Pokémon Go na ngwọta ha Akụkọ akụrụngwa
Pokémon Go Ọ bụ egwuregwu egwuregwu nke oge a ma anyị nwere ike ịsị na ọ bụ naanị egwuregwu nke oge ahụ. Ebe ọ bụ na Nintendo kwalitere ya na ụbọchị ole na ole gara aga, a tọhapụrụ ara na ụwa na ọtụtụ ndị ọrụ ewerewo n'okporo ámá na-achụ nta niile Pokémon.
Mgbe m gwachara gị na Fraịde gara aga Ihe nzuzo 7 banyere Pokémon nke ị maghịTaa, anyị chọrọ inye gị aka, n'ụzọ niile ị na-ajụ anyị site na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ site na izitere anyị email. Ma ọ bụ onye ọzọ karịa na-enye gị ihe ngwọta ụfọdụ nke Pokémon Go isi nsogbu. Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu nke egwuregwu Nintendo ọhụrụ ma ị nọ na "nsogbu", were ihe iji dee dị ka ndị a bụ isi nsogbu Pokémon Go na ngwọta ha.
1 Pokémon Go anaghị achọpụta akara GPS
2 Pokémon GO enweghị ike ịchọta njikọ intaneti
3 Anyị na agwa anyị na-eje ije mana ọ nweghị ihe na-eme
4 Pokémon Go emeela ngwa ngwa
5 Pokéball agbaala ara, ọ gaghị akwụsị ịtụ egwu
6 Pokémon GO adịghị na mba m
7 Pokémon GO anaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ m
8 Pokémon GO na-eri batrị anyị
9 Pokémon GO agaghị emeghe
10 Pokémon GO "na - ejide" n'etiti agha ma ọ bụ jide
11 Ihe ndị a zụrụ anaghị apụta ebe ọ bụla
12 Nkpu Pokémon adighi adi ma obu puo
Pokémon Go anaghị achọpụta akara GPS
Anyị chọrọ ya ma ọ bụ na anyị achọghị Iji nwee ike kpọọ Pokémon Go ọ dị mkpa iji GPS ka ọ nwee ike ịchọta anyị ma gosi anyị ụwa na-akpali akpali nke Pokémon. GPS bụ otu n'ime nsogbu ndị kachasị na egwuregwu ahụ na ọ bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-alaghachi ozi na enweghị ike ịchọta akara GPS.
Nke a nwere ike ịbụ karịa ma ọ bụ pere mpe ebe ọ bụ na ịnweta ma na-enye nkenke zuru oke ziri ezi anaghị abụkarị maka ngwaọrụ mkpanaka, yabụ chere obere oge iji dozie ya. Ọ bụrụ na ihe anaghị aga n'ihu na ozi na enweghị ike ịchọta akara GPS na-aga n'ihu na-egosi, lelee na ị nwere ọnọdụ arụ ọrụ na ekwentị gị yana ọ bụrụ na ị nwere njikọ data dị mma.
Dị ka ndụmọdụ anyị ga-agwa gị nke ahụ adịghị agbanyụ WiFi Njikọta nhọrọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nọ n’etiti okporo ámá, nke a na-enye aka ịchọta gị ngwa ngwa.
Pokémon GO enweghị ike ịchọta njikọ intaneti
Ọ bụrụ na ịnwalela egwuregwu Nintendo ọhụrụ maka ngwaọrụ mkpanaka, ị ga-ahụrịrị ozi a na ihe karịrị otu oge ma ọ dị mwute ikwu na ọ bụ ihe nkịtị, ọ bụ ezie Ọ bụghị nsogbu na Pokémon Go, mana yana ngwaọrụ mkpanaka gị.
Njehie a na - apụtakarị ma ọ bụrụ na anyị enweghị njikọ na netwọkụ nke netwọkụ, dịka ọmụmaatụ inwe njedebe anyị na ọnọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ maka na anyị nọ na mpaghara nwere obere mkpuchi.
The ngwọta na anyị nwere ike inye gị bụ na ị na-eme ka n'aka na ị nwere njikọ na netwọk nke netwọk, na ị na-adịghị na ngwaọrụ gị na-akpọ ụgbọelu mode. Iji meziwanye ụfọdụ n'ime akụkụ ndị a, ezigbo ihe ga - enyere gị aka nwere ike ịbụ ịkwaga ma si ebe dị ugbu a pụọ.
Anyị na agwa anyị na-eje ije mana ọ nweghị ihe na-eme
Ọ bụrụ na mgbe ịmalitere egwuregwu ị hụrụ na agwa gị na-ejegharị, mana ọ nweghị ihe ọ bụla mere ma anyị hụ na ọ nweghị Pokémon pụtara ma ọ bụ na enwebeghị Poképaradas, ihe na-eme. Iji gosi na nsogbu di Ga-pịa Pokéball ma chere ka menu mepee. Ọ bụrụ na nke a emeghị dịka ọ na-adị na mbụ, egwuregwu ahụ na-akụri.
Ihe ngwọta iji dozie nsogbu a n'otu oge ma nwee ike ịmalite ịchụ nta Pokémon ozugbo o kwere omume bụ imechi ngwa ahụ ma mepeghachi ya. Dabere na ma ị na-egwu site na gam akporo ma ọ bụ iOS ngwaọrụ, ị ga-emechi egwuregwu otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Pokémon Go emeela ngwa ngwa
Anyi aghaghi ichefu oge obula Nintendo malitere Pokémon Go na ahia ahia ubochi ole na ole gara aga, ya mere ugbu a Anyị nọ na egwuregwu mbụ nke egwuregwu ahụ ma n'ezie ụlọ ọrụ Japan ga-ewebata atụmatụ ọhụrụ n'ụdị mmelite na ụbọchị ndị na-abịanụ. Mgbe ụfọdụ, nke a na - eme ka egwuregwu ahụ daa nwayọ ma weghachite njehie na - enweghị nkọwa.
Iji dozie nsogbu ndị a, anyị kwesịrị ị bea ntị mgbe niile na enwere ike mmelite Pokémon Go ma hichapụ oghere ngwa ahụ site n'oge ruo n'oge.
Ọ bụrụ na ị banye n ’ụdị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ egwuregwu ahụ nwayọ, were ume miri emi ma chee nke ahụ Nintendo na-arụ ọrụ zuru oke iji mee ka ngwa ahụ dị elu na ọtụtụ nde ndị ọrụ n'ụwa nile, na anyị na-achọ kacha n'oge niile.
Pokéball agbaala ara, ọ gaghị akwụsị ịtụ egwu
N'elu aka ekpe nke ihuenyo a White pokéball, na ọtụtụ n'ime anyị achọpụtala oge ọ bụla ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ na ị maghị, nke a na-egosi oge ọ bụla ọ pụtara na egwuregwu ahụ na-anwa ijikọ na ihe nkesa egwuregwu.
Dị ka Nintendo n'onwe ya kwadoro ndị sava ahụ na-enwe nsogbu, n'ihi nnukwu ibu ọrụ n'ihi ihe ịga nke ọma Pokémon Go ebe ọnụọgụ ndị ọrụ anaghị akwụsị ito. Ọ bụrụ na Pokéball akwụsịghị ịtụ ogho, anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla ọzọ karịa inwe ndidi ma chere ka ọ gwụchaa njikọta na sava egwuregwu.
Ekwesiri iche na ka oge na-aga Nintendo ga-abawanye ikike nke ndị sava ma melite egwuregwu ahụ, na a ghaghị ikwu ihe niile, taa ọ bụghị ihe ọjọọ, na-eburu n'uche nnukwu ihe ịga nke Pokémon Go.
Pokémon GO adịghị na mba m
Maka oge ahụ Nintendo na - eme mkpọtụ Pokémon Go ọ dịkwa na mba ụfọdụ. Otú ọ dị, nke ahụ agaghị egbochi onye ọrụ ọ bụla inwe ike ịnụ ụtọ egwuregwu na gam akporo na iOS.
Maka ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ Google, ọ ga-ezu iji budata APK dị na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone ma ọ bụ iPad, ihe na-esiwanye ike ma anyị ga-enwe ike ịmepụta akaụntụ Apple iji nweta Storelọ Ahịa na mba ọzọ. Nke atọ nhọrọ bụ ichere ka Nintendo ka eze malite egwuregwu na mba gị.
Pokémon GO anaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ m
Ọ bụrụ na ijiri ịwụnye Pokémon Go, ọ bụ ezie na ọ nweghị na mba gị, ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na ọ bụ na dị ka egwuregwu ọ bụla ọzọ ọ nwere ihe kachasị mkpa iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma.
Lee, anyị gosiri gị opekempe chọrọ igwu egwu;
Android 4.4 ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ dị elu
HD mkpebi (1280 x 720 pikselụ) ma ọ bụ karịa
Ọ naghị arụ ọrụ na Intel CPU ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị na njedebe niile
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị erughị nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, ị gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịwụnye ya na ọdụ ọzọ ma ọ bụ zụta nke ọhụrụ na ahịa.
Pokémon GO na-eri batrị anyị
Otu n'ime nnukwu nsogbu Pokémon Go nwere na nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eme mkpesa banyere ya, bụ nnukwu batrị nke egwuregwu ahụ riri. Egwuregwu Nintendo ọhụrụ ahụ na-eji igwefoto na GPS mgbe niile, nke doro anya nwere nnukwu oriri batrị.
Ihe ngwọta nke nsogbu a dị mgbagwoju anyaỌ bụ ezie na ị nwere ike belata nchapụta ihuenyo oge niile ka ọ dịkarịa ala ma mechie ngwa niile na-arụ ọrụ na ndabere, iji chekwaa ụfọdụ batrị ma nwee Pokémom Go maka obere oge. N'ezie, ọ gaghị abụ echiche ọjọọ na ị na-ewere otu mgbe niile mpụga batrị.
Pokémon GO agaghị emeghe
Ọ bụrụ na ịchọtala minit ole na ole iji nwee obi ụtọ Pokémon Go na egwuregwu ahụ emegheghị, ewela iwe ma ọ bụ obi nkoropụ dị ka ọzọ, ndị na-eme ihe ọjọọ bụ sava Nintendo, nke ị ga - enwe ike ịme ihe ọ bụla.
Companylọ ọrụ Japan nwere nnukwu sava iji jeere narị otu narị puku ndị egwuregwu egwu ndị gbagara n'okporo ámá ịchụ nta Pokémon niile, mana ọ nweghị ụdị ọhụụ gara aga, nke na-akpata nsogbu ikike. Olileanya ha ga-edozi ha n'oge na-adịghị anya na ụbọchị ga-abịa mgbe anyị nwere ike igwu egwu n'ụzọ zuru oke.
Pokémon GO "na - ejide" n'etiti agha ma ọ bụ jide
Ọ bụrụ na ị kpọọla Pokémon Go ruo ogologo oge, ị ga-enwerịrị ike ị ga-ata ahụhụ egwuregwu ahụ n'etiti agha ma ọ bụ jide, na-ahapụ gị, dịka ọmụmaatụ, na-eche ma ọ bụrụ na ị mechara nwee ike ijide Pokémon na ị bụ a Pokéball.
Banyere Pokémon, ịkwesighi ichegbu onwe gị n'ihi na ọ ga-atọrịrị, n'agbanyeghị Ọ dịghị onye ga-azọpụta gị ka ị ghara imechi ma mepee egwuregwu ahụ iji nọgide na-anụ ụtọ ịchụ nta Pokémon.
Ihe ndị a zụrụ anaghị apụta ebe ọ bụla
Pokémon Go na-enye anyị ohere ịzụrụ ihe n'ime ngwa ahụ, iji melite ọkwa anyị na egwuregwu ahụ, agbanyeghị n'oge ụfọdụ ọ na-enye ihe karịrị isi ọwụwa nye ọtụtụ ndị ọrụ. Ma nke ahụ bụ n'ọtụtụ oge, ihe ndị anyị zụtara anaghị apụta ebe ọ bụla, ma ọ dịkarịa ala na nke mbụ.
The ngwọta nsogbu a bụ nnọọ mfe na bụ na Ihe ị ga - eme bụ imechi nnọkọ ahụ na - arụ ọrụ ma banyeghachi iji gosipụta ihe ndị azụrụ na ụlọ ahịa Pokémon Go.
Olileanya Nintendo ga-edozi nsogbu ndị a, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha pere mpe. N'ezie, ọ nwere ike ịka mma maka ụlọ ọrụ Japan ka ha bute nsogbu ndị sava kachasị emetụta anyị.
Nkpu Pokémon adighi adi ma obu puo
N'ikpeazụ, anyị ga-ezo aka ọzọ nke kasị enwe nsogbu na nke nwere njikọ na akwa Pokémon, nke na ọtụtụ oge anaghị akụkụ ma ọ bụ na-apụ n'anya na-enweghị ọzọ. Ọzọkwa, nke a bụ n'ihi nsogbu ihe nkesa, nke anyị na-enweghị ike ime ihe ọ bụla, ma e wezụga chere Nintendo iji dozie ha.
You hụla nsogbu ọ bụla na Pokémon Go nke anyị na-achịkọtaghị na ndepụta a?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ndị a bụ nsogbu bụ isi nke Pokémon Go na ngwọta ha
Egwuregwu ahụ mepee ma kwado map mana agwa m anaghị aga n'ihu, gịnị ka m ga-eme? Enwere m LG g3 mini
enyi m nwere lg g3 ma nwee nsogbu yiri nke a, nke a bụ n'ihi GPS, iji dozie ya ibudata ọnọdụ GPS (nke ị na-emegharị GPS gị, mgbe ị malitegharịrị ekwentị gị), wee budata GPS dị mkpa (iji mezie gps gị) na mechaa budata GPS idozi (nke ị na-etinye mgbanwe ndị ahụ tupu emee ya)